Email Chinyorwa Mutsara Mazwi Anokonzeresa Spam Mafirita Uye Nzira Iwe kune iyo Junk Folder | Martech Zone
Kuita kuti maemail ako aendeswe kune junk forodha kunonetsa… kunyanya kana wakashanda nesimba kugadzira runyoro rwevanyoreri vakapinda zvizere uye vanoda kuona email yako. Pane zvinhu zvishoma zvinokanganisa zita remunhu atumira izvo zvinogona kukanganisa kugona kwako kuti usvike kuinbox:
Kutumira kubva kudura kana IP kero ine mukurumbira wakashata wezvichemo zve spam.
Kuziviswa seSPAM nevanyoreri vako.
Kuwana kusapindirana kwakashata kubva kune vako vanogamuchira (usambovhura, kudzvanya, uye nekukasira kusanyoresa kana kudzima maemail ako).
Ingave kana kwete iyo yakakodzera DNS mapindiro anogona kusimbiswa kuti ive nechokwadi chekuti email inotenderwa nekambani kuti itumirwe neiyo email mupi.
Kuwana huwandu hwepamusoro hwemabounces pamaemail aunotumira.
Kunyangwe paine kana kusachengeteka zvinongedzo mumuviri weemail yako (izvi zvinosanganisira maURL emifananidzo).
Ingave kana kwete email kero yako yekupindura iri mubhokisi retsamba mazita eanotambira, kana akanyorwa seakachengeteka atumira.
Mazwi ari mukati mako email chinyorwa mutsara izvo zvinowanzoitika kune spammers.
Ungave uine kana usina chinongedzo chekusanyora mumutumbi wemaemail ako uye zvaunodaidza. Isu dzimwe nguva tinopa zano vatengi kuti vagadzirise izvi zvinodiwa.
Mutumbi weemail yako. Kazhinji, mufananidzo mumwe chete HTML email isina mavara inogona kumisa bhokisi retsamba. Dzimwe nguva, anogona kunge ari mazwi mukati memuviri weemail yako, iyo anchor mameseji mumalink, uye rumwe ruzivo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti aya maalgorithms akagadziridzwa zvakanyanya nevapeji vebhokisi retsamba. Haisi cheki rondedzero yaunofanirwa kusangana ne100% yezvirongwa. Semuenzaniso, kana email kero yako yekupindura iri mubhokisi retsamba mazita evanogamuchira, unogara uchiwana nzira yekuenda kuinbox.
Kana iwe uine huru inbox yekuisa uye matani ekubatikana pamaemail ako, unogona kutiza nemaemail ane hukasha uye woshandisa mazwi anogona kukonzeresa anotumira ane hurombo kana wechidiki mukurumbira. Chinangwa pano ndechokuti iwe ziva urikufambiswa kuenda junk folda, kuderedza mazwi anogona mureza SPAM mafirita.
Email Chinyorwa Mutsara SPAM Mashoko
Kana iwe usina mukurumbira wakasimba uye usiri mune vanogamuchira, imwe yedzakareruka nzira dzekuti maemail ako anamire mu Junk Folda uye yakarongwa seSPAM ndiwo mazwi awakashandisa mumutsara wemusoro weemail. SpamAssassin ndeye yakavhurika-sosi spam ichivharira iyo inoburitsa mitemo yayo yekuzivisa SPAM pane yayo Wiki.
Iyi ndiyo mitemo SpamAssassin inoshandisa nemazwi mumutsetse wenyaya:
Musoro wenyaya hauna chinhu (Thanks Alan!)
Chinyorwa chine mazwi ekuzivisa, kupindura, rubatsiro, kurudziro, kupindura, kunyevera, kuzivisa, kukwazisa, nyaya, kubhadharwa, chikwereti, chikwereti, chikwereti, kusungirwa kana kumiswazve…
Musoro wenyaya une mwedzi wakapfupiswa (semuenzaniso: Chivabvu)
Musoro wenyaya une mazwi anoti cialis, levitra, soma, valium kana xanax.
Musoro wenyaya unotanga na "Re: nyowani"
Musoro wenyaya une "hombe"
Musoro wenyaya uyu une "anotendera iwe" kana "abvumidzwa"
Musoro wenyaya une "pasina muripo"
Musoro wenyaya une "matanho ekuchengetedza"
Musoro wenyaya une "zvakachipa"
Musoro wenyaya une "low rates"
Mutsetse wenyaya une mazwi "sekuonekwa".
Musoro wenyaya unotanga nechiratidzo chedhora ($) kana spammy rinotarisa mari kutaurwa.
Musoro wenyaya une mazwi "ako mabhiri".
Musoro wenyaya une mazwi anoti "mhuri yako".
Mutsetse wenyaya une mazwi "hapana mushonga" kana "online mishonga".
Musoro wenyaya unotanga na kurasikirwa, "Kuonda", kana kutaura nezvekudzora huremu kana mapaundi.
Musoro wenyaya unotanga nekutenga kana kutenga.
Nyaya iyi inotaura chimwe chinhu chakaipa nezvevechidiki.
Musoro wenyaya unotanga na "Unorota here", "Unaye", "Unoda", "Unoda", nezvimwe.
Musoro wenyaya MAZVO OSE GURU.
Musoro wenyaya une chikamu chekutanga cheiyo email kero (semuenzaniso: chinyorwa chine "Dave" uye iyo email inonyorerwa Dave@ domain.com).
Musoro wenyaya uyu une zvine chekuita nezvebonde.
Mutsara wenyaya unoedza kufukidza kana kupotsa mazwi. (semuenzaniso: c1alis, x @ nax)
Mutsara wenyaya une Chirungu kana chiJapan kodhi yeCEC
Musoro wenyaya une koregi yekuKorea isina kukumbirwa.
Mune maonero angu akatendeseka, mazhinji eaya mafirita anosekesa uye anowanzo kuvharira makuru ekutumira maemail kuti asaite kuinbox. Anenge mutengi wese anotarisira email kubva kune vatengesi vavari kuita bhizinesi navo, saka chokwadi chekuti kutaura chinhu nezvechipo kana mutengo unogona kuita kuti uvharwe zvinoshungurudza. Uye ko kana iwe uchida chaizvo kupa chimwe chinhu FREE kune anozvinyoresa? Zvakanaka, usazvinyora mumutsara wezvidzidzo!
Unoda Rubatsiro NeYako Email Reputation?
Kana iwe urikuda rubatsiro kumisikidza kana kuchenesa yako email mukurumbira, yangu yekubvunza femu inodaro email deliverability consulting kune vatengi vakawanda. Masevhisi edu anosanganisira:
Email list yekuchenesa kuve nechokwadi chekuti mabhonzi anozivikanwa uye anoraswa email kero anobviswa kubva kune yako system.
Kutama kune itsva email service provider (ESP) ine IP Warm mishandirapamwe inoita kuti usimuke nemukurumbira wakasimba.
Inbox bvunzo yekuiswa kutarisa uye kuona inbox yako vs. junk folder kuiswa.
Reputation repair kubatsira vakanaka vatumiri veemail kuti vavake kumashure e-mail akasimba mukurumbira wepamusoro inbox yekuiswa.
Inopindura email template dhizaini, kuita, uye kuyedza kune chero email mupi webasa.
Kana iwe uchitumira angangoita zviuru zvishanu zveemail kune chero mupi webhokisi retsamba, isu tinogona kunyange kuongorora chirongwa chako kuti tikupe iwe mhinduro pane hutano hwese chirongwa chako chekushambadzira email.
Kwakabva Izwi SPAM
Ah, uye kana chiitiko ichi, wanga usingazivi kuti izwi rekuti SPAM rabva kupi… rinobva kuMonty Python sketch maererano nechigadzirwa chenyama yemumagaba chakakurumbira.
Tags: email zvakanakisa maitirospam firitaspam firita keywordsspam firita mazwispam mazwispamassassinmutsara mutsara nzira dzakanakisamitsara yemusoro